Home Wararka Maanta Shabaab oo sheegasho yaab leh kasoo saartay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho
Shabaab oo sheegasho yaab leh kasoo saartay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda qaraxii maanta ka dhacay Isgoyska Ceelgaabta ee magaalada Muqdisho, kaasi oo jugtiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir.
War kasoo baxay Shabaab ayaa lagu sheegay in Is-miidaaye ka tirsan xarakada uu fuliyay qaraxaas, bartilmaamedkiisana uu ahaa afar Bas oo siday Ergo kasoo baxday xarunta Jeneraal Kaahiye oo ay maanta ka dhaceysay doorashada xildhibaanada kasoo jeeda gobolada Waqooyi.
Al-Shabaab ayaa sheegatay in qaraxaas ku dileen 6 xubnood oo kamid ah ergadii soo xulaysay xildhibaanada iyo 5 kamid ah ciidamadii Booliska ahaa oo saarna kolonyo galbinayay.
Sidoo kale waxaa warka kasoo baxay Al-Shabaab lagu sheegay in qaraxaas uu dhaawac ka gaaray 13 Ergo ah iyo 3 ka tirsan askarta ilaalada u aheyd ee booliska.
Illaa hadda ma jirto cid si rasmi ah u xaqiijisay khasaaraha ay sheegatay Al-Shabaab inay gaarsiisay ergada iyo ciidamadii la socday, maadama ay wararka qaar sheegayan in ergada qaraxaas lala beegsaday ay ka badbaadeen.
Dhanka kale, Afhayeenka ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Cabdifitaax Aadan Xasan oo goor sii horeysay ka warbixiyey qaraxaan ayaa sheegay in waxyeelo xoogan kasoo gaartay dad shacab ah oo xilligaas ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay.
Maalmihii u dmabeeyey ayaa waxaa gudaha caasimada ee Muqdisho ka dhacayey falal liddi ku ah ammaanka, sida qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo ku soo aaday, xilli doorasho.